JIO Token စျေး - အွန်လိုင်း JIO ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို JIO Token (JIO)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ JIO Token (JIO) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ JIO Token ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ JIO Token တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
JIO Token များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
JIO TokenJIO သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0248JIO TokenJIO သို့ ယူရိုEUR€0.021JIO TokenJIO သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.019JIO TokenJIO သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0226JIO TokenJIO သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.221JIO TokenJIO သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.156JIO TokenJIO သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.547JIO TokenJIO သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0922JIO TokenJIO သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0329JIO TokenJIO သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0346JIO TokenJIO သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.546JIO TokenJIO သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.192JIO TokenJIO သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.135JIO TokenJIO သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.86JIO TokenJIO သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.4.19JIO TokenJIO သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.034JIO TokenJIO သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.038JIO TokenJIO သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.773JIO TokenJIO သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.173JIO TokenJIO သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.65JIO TokenJIO သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩29.47JIO TokenJIO သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦9.59JIO TokenJIO သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.81JIO TokenJIO သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.679
JIO TokenJIO သို့ BitcoinBTC0.000002 JIO TokenJIO သို့ EthereumETH0.00006 JIO TokenJIO သို့ LitecoinLTC0.000457 JIO TokenJIO သို့ DigitalCashDASH0.000274 JIO TokenJIO သို့ MoneroXMR0.000279 JIO TokenJIO သို့ NxtNXT1.94 JIO TokenJIO သို့ Ethereum ClassicETC0.00366 JIO TokenJIO သို့ DogecoinDOGE7.17 JIO TokenJIO သို့ ZCashZEC0.000301 JIO TokenJIO သို့ BitsharesBTS0.765 JIO TokenJIO သို့ DigiByteDGB0.794 JIO TokenJIO သို့ RippleXRP0.0882 JIO TokenJIO သို့ BitcoinDarkBTCD0.000856 JIO TokenJIO သို့ PeerCoinPPC0.0824 JIO TokenJIO သို့ CraigsCoinCRAIG11.31 JIO TokenJIO သို့ BitstakeXBS1.06 JIO TokenJIO သို့ PayCoinXPY0.433 JIO TokenJIO သို့ ProsperCoinPRC3.12 JIO TokenJIO သို့ YbCoinYBC0.00001 JIO TokenJIO သို့ DarkKushDANK7.97 JIO TokenJIO သို့ GiveCoinGIVE53.78 JIO TokenJIO သို့ KoboCoinKOBO5.66 JIO TokenJIO သို့ DarkTokenDT0.0229 JIO TokenJIO သို့ CETUS CoinCETI71.72